Bible Reader | sisaalatumulung Language
Gyenesis Anaasɛ MfitiaseɛEksodɔs Anaasɛ OtukorɔLewitikɔs Anaasɛ Ɛsom Ho NhyehyɛɛNumeri Anaasɛ Ɛserɛ So AkwantuoDeuteronomium Anaasɛ Mmara No NtimuYosua NwomaAtemmufoɔ NwomaRut NwomaSamuel Nwoma A Ɛdi KanSamuel Nwoma A Ɛtɔ So MmienuAhemfo Nwoma A Ɛdi KanAhemfo Nwoma A Ɛtɔ So MmienuBerɛsosɛm Anaasɛ Kronika Nwoma A Ɛdi KanBerɛsosɛm Anaasɛ Kronika Nwoma A Ɛtɔ So MmienuEsra NwomaNehemia NwomaEster NwomaHiob NwomaNnwomMmebusɛmƆsɛnkafoɔNnwom Mu DwomOdiyifoɔ Yesaia NwomaOdiyifoɔ Yeremia NwomaKwadwomOdiyifoɔ Hesekiel NwomaDaniel NwomaOdiyifoɔ Hosea NwomaOdiyifoɔ Yoel NwomaOdiyifoɔ Amos NwomaOdiyifoɔ Obadia NwomaOdiyifoɔ Yona NwomaOdiyifoɔ Mika NwomaOdiyifoɔ Nahum NwomaOdiyifoɔ Habakuk NwomaOdiyifoɔ Sefania NwomaOdiyifoɔ Hagai NwomaOdiyifoɔ Sakaria NwomaOdiyifoɔ Malaki NwomaAsɛmpa No Sɛdeɛ Mateo Twerɛ MaeɛAsɛmpa No Sɛdeɛ Marko Twerɛ MaeɛAsɛmpa No Sɛdeɛ Luka Twerɛ MaeɛAsɛmpa No Sɛdeɛ Yohane Twerɛ MaeɛAsomafoɔ No NnwumaPaulo Nwoma A Ɔtwerɛ Kɔmaa RomafoɔPaulo Nwoma A Ɛdi Kan A Ɔtwerɛ Kɔmaa KorintofoɔPaulo Nwoma A Ɛtɔ So Mmienu A Ɔtwerɛ Kɔmaa KorintofoɔPaulo Nwoma A Ɔtwerɛ Kɔmaa GalatifoɔPaulo Nwoma A Ɔtwerɛ Kɔmaa EfesofoɔPaulo Nwoma A Ɔtwerɛ Kɔmaa FilipifoɔPaulo Nwoma A Ɔtwerɛ Kɔmaa KolosefoɔPaulo Nwoma A Ɛdi Kan A Ɔtwerɛ Kɔmaa TesalonikafoɔPaulo Nwoma A Ɛtɔ So Mmienu A Ɔde Kɔmaa TesalonikafoɔPaulo Nwoma A Ɛdi Kan A Ɔtwerɛ Kɔmaa TimoteoPaulo Nwoma Ɛtɔ So Mmienu A Ɔtwerɛ Kɔmaa TimoteoPaulo Nwoma A Ɔtwerɛ Kɔmaa TitoPaulo Nwoma A Ɔtwerɛ Kɔmaa FilemonNwoma A Wɔtwerɛ Kɔmaa HebrifoɔYakobo NwomaPetro Nwoma A Ɛdi KanPetro Nwoma A Ɛtɔ So MmienuYohane Nwoma A Ɛdi KanYohane Nwoma A Ɛtɔ So MmienuYohane Nwoma A Ɛtɔ So MmiɛnsaYuda NwomaYohane Adiyisɛm
Edin Gyenesis a wɔde ato nwoma yi aseɛ ne mfitiaseɛ. Nwoma no ka sɛdeɛ wɔbɔɔ wiase ne adasamma ne deɛ ɛyɛɛ a bɔne ne amanehunu baa wiase. Ɛka ɔkwan a Onyankopɔn de nnipa fa so nso ho asɛm. Wɔtumi kyɛ Gyenesis nwoma no mu mmienu ma ɛyɛ yie.
1. Ti 1—11 ka sɛdeɛ wɔbɔɔ wiase ne adasamma ho abakɔsɛm. Ɛha na wɔka Adam ne Hawa, Kain ne Habel, Noa ne nsuyire no ne Babel Abantenten no ho asɛm.
2. Ti 12—50 ka Israelfoɔ tetefoɔ ho asɛm. Abraham na ɔdi kan. Ne gyidie ne ɔsetie a ɔyɛ maa Onyankopɔn nti, ɛmaa no gyee din kɛseɛ. Abraham akyi na Isak ne Abraham nana Yakob a wɔsane frɛ no Israel no die. Yakob woo mmammarima dummienu. Wɔn na wɔhyɛɛ Israel mmusuakuo dummienu no aseɛ. Yosef ka Yakob mmammarima dummienu no ho deɛ, nanso nsɛm a wɔka fa ne ho no yɛ sononko. Ɛnam ne so na Yakob ne ne mma a aka no ne wɔn yerenom ne wɔn mma kɔfirii Misraim kɔtenaa hɔ. Nwoma yi ka nnipa ho nsɛm deɛ, nanso deɛ Onyankopɔn ayɛ no titire na ɛsi so dua. Ɛde adebɔ na ɛfiri aseɛ, na ɛde bɔ a Onyankopɔn hyɛɛ sɛ ɔbɛkɔ so ahwɛ ne nkurɔfoɔ so daa no awie. Onyankopɔn na nwoma no ka ne ho asɛm titire. Ɔbu atɛn, na ɔtwe wɔn a wɔyɛ bɔne aso. Ɔsane ma wɔn akwankyerɛ, na wadanedane wɔn aboa wɔn wɔ wɔn asetena mu. Wɔtwerɛɛ nwoma yi akyɛ. Ɛka nnipa gyidie ho asɛm sɛ ɛbɛyɛ a saa gyidie no bɛtim.
Wɔbɔɔ wiase ne adasamma 1.1—2.25
Bɔne ne amanehunu mfitiaseɛ 3.1-24
Ɛfiri Adam so kɔsi Noa so 4.1—5.32
Noa ne nsuyire ho asɛm 6.1—10.32
Babel Abantenten ho asɛm 11.1-9
Ɛfiri Sem so kɔsi Abram so 11.10-32
Tete Agyanom: Abraham, Isak ne Yakob ho nsɛm 12.1—35.29
Esau asefoɔ 36.1-43
Yosef ne ne nuanom ho asɛm 37.1—45.28
Israelfoɔ kɔtenaa Misraim 46.1—50.26